Mpitroka ny loto ao Ahoana no asa? - China Shandong Better Motor
Ny manetry tena banga madio dia iray amin'ireo fitaovana fanadiovana ankohonany handiest ampiasaina amin'izao fotoana izao. Ny tsotra nefa mahomby endrika efa levona amin'ny manana ny fanadiovana vovoka sy poti kely hafa eny amin'ny faritra tanana izy, ary nampifanendreny manadio trano ho mahomby kokoa sy somary asa haingana. Mampiasa na inona na inona fa suction, ny banga whisks lasa vovoka sy ny fivarotana azy ho fanariana.
Koa ahoana no miasa mahery fo ireo tokantrano?
Ny fomba tsotra indrindra mba hanazavana ny fomba madio ny banga dia afaka mitaiza kely ny potipoti-javatra dia ny mieritreritra azy toy ny mololo. Rehefa maka sip ny zava-pisotro alalan'ny mololo, ny hetsika ny minono mamorona rivotra ratsy tsindry ao anaty mololo: ny tsindry izay ambany noho ny rivo-piainana ny manodidina. Tahaka amin'ny habakabaka sarimihetsika, izay iray banga ao amin'ny mandefa sambon ny Hull sucks ny olona ho toerana, ny banga madio miteraka ratsy tsindry ao anatiny, izay mahatonga nandeha ny rivotra ao anatiny.
Ny banga madio ny herinaratra mampiasa maotera izay spins mpankafy, mbola minono amin'ny rivotra - ary misy poti kely ao anatin'ilay - ary nanosika azy teny am-pita, an-kitapo na mandatsa, mba hamoronana ny ratsy tsindry. Mety hieritreritra ianao avy eo, rehefa avy segondra vitsivitsy dia mety tsy hiasa, satria ianao ihany dia afaka manery be rivotra ho afa-miala ny toerana. Mba hamahana izany, ny banga manana setroka seranan-tsambo izay ka manampatra ny rivotra avy teny am-pita, mamela ny maotera mba hanohy miasa ara-dalàna.
Ny rivotra, na izany aza, tsy hamaky fotsiny eo, fa nandroahana azy avy eny am-pita. Mety ho tena mampidi-doza ny olona amin'ny fampiasana ny banga. Nahoana? Eny, teo an-tampon'ny ny vovoka sy ny grime fa banga mitondra, dia tena tsara ihany koa manangona poti izay saika tsy hita maso ny maso. Raha toa izy ireo-tsigara eo amin'ny malalaka be, dia mety hiteraka fahavoazana ho any amin'ny havokavoka. Koa satria tsy poti rehetra ireo no voafandriky ny kitapo, na mandatsa, ny banga mandalo ny rivotra madio amin'ny alalan'ny iray, fara fahakeliny, ary matetika tsara sivana ny HEPA (High fahombiazana Particulate fisamborana) sivana mba hanala ankamaroan'ny ny vovoka. Izao ihany no rivotra soa aman-tsara ho niala aina indray.
Ny herin 'ny banga madio dia tapa-kevitra ny tsy' ny herin 'ny maotera, fa koa ny haben'ny ny fihinanana seranan-tsambo, ny ampahany izay sucks ny loto. Ny kelikely kokoa ny haben'ny ny fihinanana, dia vao mainka niteraka suction heriny, toy ny mitovy voafehy ny habetsahan'ny rivotra amin'ny alalan'ny teritery kokoa andalan-teny dia midika fa ny rivotra dia tsy maintsy hifindra haingana kokoa. Izany no antony madio vacuum kofehy mifamatotra amin'ny tery, seranana teny kely toa manana be suction ambony kokoa noho ny iray lehibe kokoa.
Maro isan-karazany ny vacuum madio, fa azy rehetra miasa amin'ny famoronana koa io toro lalana ny ratsy fanerena mampiasa mpankafy, ary nahatratra ny ninonoanao-up vovoka, manadio ny rivotra setroka ary avy eo dia nanafaka azy io. Izao tontolo izao dia ho be dirtier toerana tsy misy olona izy.
Post fotoana: Feb-27-2018